Wana Mukurumbira Nemazita Akanaka e Instagram Instagram ➡️ Vateveri ▷ ➡️
January 20, 2019 0 mashoko 11897
Chimwe chezvinhu zvakakosha kana uine account ye Instagram izita, iri rakakosha chaizvo kubvira ndiyo nheyo yakakosha yeakaundi kuti uri kutyaira
Iko nekuda kwechikonzero ichocho kuti nhasi ticha kukupa iwe zano rakanaka kuti uve nekunyanya mazita e Instagram pedyo.
Chii chinodiwa kuti uve nemazita akanaka e Instagram?
Iro zita rinofanira kuve chimwe chinhu icho spark kufarira vateveri vako, tinofanira kuyeuka kuti parizvino pane anopfuura mamirioni e500 evashandisi vanoshandisa mwedzi wega wega. Nechikonzero ichocho, wakapihwa makwikwi akawanda, zvakafanira kusimbisa
Kureruka kwakakosha kuti uve nezita rakanaka, kunyangwe zita reakaundi yako richizomira kubva kune vamwe, iwe unofanirwa kufunga nezvekuti aya marudzi emazita havagone kuoma zvekunyora, chinofanira kuve chinhu icho munhu wese anogona kuyeuka nekuziva chero kupi.
Mazita ese aunosarudza anofanira kuve akakwanira iwe sanganisa zvizere nezvamuri kupa kuruzhinji Saka kuti nenzira iyi iwe unogona nekukurumidza kusanganisa vese zita uye zvinhu zvaunokurudzira
Hapana bonde kana kusimba muviri
Edza kudzivisa chero zita rakabatana zvakanangana nezvawaita, ingava iwo mapeji ezvepabonde kana ekurovedza muviri zviri nyore. Rakanakisa izita rakasarudzika iro rakakura asi rinotaridzika uye rinogona kupa revo kune izvo zvaunopa pasina kuwira mune zviri pachena.
Chinhu chakanakisa ndechekuti mukuita kwako kwese usachinja zitaKana iwe wakakurumbira, zviri nani kuti usiye zita rako, kana riri zita rechitoro, zviri nani kuti urege kuchichinja, izvi zvinogona kukanganisa kutsvaga kwevashandisi vako. Kunyanya inogona kukanganisa kana iwe uri kuchinja.
Mazita e Instagram aunoona pano dzatovepo, zvisinei iwe unogona kuishandisa semuenzaniso iwe unogona kushandisa chero pazita rako kana yekambani yako sekudaro. Sarudza zita rakanaka uye ita kuti bhizinesi rako litenge pa Instagram.
MukadziName + Kudada. Semuenzaniso: EliaPride
Mazita eChirungu muChirungu
Tenzi kana Mukurukwa
Mamwe mazita anopenga e Instagram
Mukadzi Mukadzi + Jenner
The "Hapana Zita"
Zita rangu "Iwe Chenjera"
The "Kurumidza uye Kutsamwa"
Zita rako + Lee
Izita Romunhu + Santos
Ini ndiDonald Trump
Speedy + zita rako (pamwe chete)
ndinoda PLL <3
Zita rako + Montana
Izita rako + Toreto
Unogona sei kushandura zita pa Instagram?
Kana iwe waizozvifungira uye iwe uchifunga kuti inguva yekutevera yega nhanho zvambotaurwa pamusoro apa, tichakusiya chidzidzo chekuti ungachinja sei zita rako reaccount kubva mukushandisa.
Pinda yako Instagram account.
Sarudza "Hora Mbiri."
Dzvanya pane iro munda pane yako "zita" kana "zita re ..." uye shandura ivo nekuisa iwo mavara iwe aunoda.
Dzvanya pane "Gadzirira" mukona yokumusoro kurudyi.
Kana uchinge wangochinja zita rako unofanira kuchengeta mupfungwa kuti unofanira kumirira kwechinguva chidiki usati waita imwe shanduko. Saka iwe unofanirwa kuve uine chokwadi chekuita shanduko uye kugutsikana nazvo usati wagamuchira.
Tinokubatsira zvisimudzire mumasocial network.
1 Chii chinodiwa kuti uve nemazita akanaka e Instagram?
1.4 Hapana bonde kana kusimba muviri
1.5 Usachinja zita
2 Mienzaniso yemazita
2.1 Curious zita
2.2 Mazita evasikana
2.3 Mazita eChirungu muChirungu
2.4 Mamwe mazita anopenga e Instagram
3 Unogona sei kushandura zita pa Instagram?
Zvakanaka here kunyoresa yakavanzika Instagram account yekambani?
Tsvaga maitiro ekuita mari kunyora zvinyorwa
Ndiani anochengetedza mafoto angu pa Instagram?